(ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ ၁.၀ ၁.၁ Yangon General Hospital။ Yangon City Development Committee။ 2009-01-02 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၁၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး&oldid=421672" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၈:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။